» तपाईंसँग काम गर्ने जोश र उद्यमशीलता गर्ने क्षमता छ तर पैसा छैन भने हामीकहाँ आउनुस्…
तपाईंसँग काम गर्ने जोश र उद्यमशीलता गर्ने क्षमता छ तर पैसा छैन भने हामीकहाँ आउनुस्…
२०७८ मंसिर १२, आईतवार २३:२४
युवा स्वरोजगार कोष २०६५ मा स्थापना भएको हो । कोषको मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोग गर्दै स्थानीयस्तरमै उनीहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्नुु हो । नेपालमा बेरोजगारको संख्या दिनानुु दिन बढ्दै गइरहेको स्थितिमा एकातिर रोजगारीको सम्भावना घट्दै गइरहेको र अर्कोतिर सरकारले एकतिहाइलाई पनि रोजगारी दिन नसक्ने स्थितिमा नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउने प्रयोजनबाट कोषको स्थापना भएको थियो ।
बजारका बिचौलियाहरूले उत्पादक र उपभोक्ताबीचको खाडललाई सकेसम्म कम गर्ने, उत्पादकले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य पनि सही नपाउने र उपभोक्ताले पनि सही मूल्यमा खरिद गर्ने नपाउने अवस्था रहेकामा बिचौलियापनलाई कम गर्दै उत्पादनलाई स्थानीय रोजगारीसँग जोड्ने उद्देश्य कोषको हो । उद्देश्य राम्रो भए पनि राजनीतिक फेरबदलमा कोषले आशातित् काम गर्न सकेन । देशमा रहेका बेरोजगार युवा विदेशिनुपर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति नपाउने नेपालको मूल समस्यालाई कम गरेर स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोग गर्ने हो ।
कोषको उद्देश्य कति पूरा भयो ?
युवा स्वरोजगार कोषले केही केही राम्रा काम गरेको छ । कोषले व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने क्रममा बितेका १२ वर्षमा ७८ हजार जनालाई स्वरोजगार बनाइसकेको छ । कोषको उद्देश्य वार्षिक रूपमा २० हजारलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखे पनि तदनुुरूप अझ काम हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा पनि १२ हजारलाई स्वरोजगार बनाउने योजना छ ।
स्थानीय उत्पादनलाई बिचौलियाबाट हटाएर सीधै उपभोक्तासम्म पु¥याउन गरेको पहलले अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन । यद्यपि कोषले गरेका काम सर्वसाधारणसम्म जानकारी गराउन चुक्दा कोष प्रभावकारी नभएको हो कि भन्ने भान परेको छ ।
कोष स्थापनाको उद्देश्य पूरा हुन नसक्नुका कारणहरू
राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कोषले आफ्नो कौशल देखाउन सकेन । व्यवस्थापनले जसरी ‘काम’ गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेन । सरकारले दिएको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न व्यवस्थापनले कार्यान्वयनयोग्य मौलिक योजना बनाउन नसक्दा पछि परेको देखिन्छ । हुन त योजना जति नै राम्रो भए पनि स्रोत अभाव भए कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ र असफलसिद्ध हुन्छ । स्रोतको अभाव हुन नदिन सुरुको चरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकेरै लगानी गर्न निर्देशन दिइएको थियो । निर्देशन दिएरै लगानी भएकोबाहेक थप लगानी भएन । सुरुमा स्रोतको अभाव हुँदै गर्दा भएका स्रोतको पनि उचित परिचालन हुन नसक्दा समस्या भयो ।
ऋणीको मानसिकता र समस्या समाधानका सूत्र
कोषको पहिलो स्रोत नेपाल सरकारले सीधा ‘फन्डिङ’ हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने लगानी पनि कोषको स्रोत हो । कोषको सबैभन्दा ठूलो स्रोत विपन्न वर्ग कर्जा नै हो । त्यस्तै कोषले आफैं स्रोत परिचालन गरेर आउने ब्याज पनि अर्को स्रोत हो । विदेशी दातृ निकायले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबाट पनि कोषमा केही रकम स्रोतका रूपमा जुट्छ ।
विपन्न वर्गको कर्जा कोषमा ल्याउन म आइसकेपछि विशेष पहल पनि गरेको छु । म आफैं पूर्वबैंकर भएकाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग विपन्न वर्गको नाममा जाने कर्जा कोषमा ल्याउन थप सहज भएको छ । कोषले आधार ब्याजदर (बेस रेट) मा नभएर ३.५ प्रतिशत ब्याजदरमा विपन्न वर्ग कर्जा लिने गरेको छ । कोषले ८ प्रतिशतमा सहकारीलाई लगानी गर्छ र ६० प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ । सरसर्ती हेर्दा ३.५ प्रतिशतमा लिएको कर्जा ३.२ प्रतिशतमा लगानी गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
विगतमा कृषि विकास बैंकमार्फत लगानी गरेको लगानी मिनाहा गरिएकाले अझै पनि आममानिसमा सरकारले दिएको पैसा फिर्ता गर्नु पर्दैन भन्ने सोचाइ रहेको पाइन्छ । कोषमार्फत गरेको लगानी पनि फिर्ता गर्नु पर्दैन भन्ने नागरिकको मानसिकताका कारण यदाकदा समस्या भएको पाइन्छ । यसले कर्जा असुलीमा केही समस्या सिर्जना गरेको छ । कोषको लगानीलाई सरकारी पैसा भनेर ऋणीहरूले सहज रूपमा नतिर्ने रहेछन् । ऋणीहरूमा अहिले हामीले पैसा तिर्ने तर, नतिरेकाले पछि नतिरे पनि हुने भन्ने सोचले काम गरेको छ । विगतमा कृषि विकास बैंकको ऋण ज–जसले तिरे उनीहरूलाई कुनै सुविधा दिइएन तर, जसले तिरेनन् तिनको मिनाहा भएका कारण कोषको रकम तिर्न पनि आनाकानी गरेको पाइन्छ । अन्य परियोजनामा भएको लगानीको पैसा नतिरे माफी हुँदा कोषमाथि प्रश्न उठेको छ ।
कोष सरकारी संयन्त्र भए पनि यसको प्रकृति वित्तीय संस्थाको जस्तो छ । सरकारी कोष भएकाले सरकारको नीति र सरकार परिवर्तनको असर योजना कार्यान्वयनमा पनि पर्ने गरेको छ ।
कोषको संरचना, योजना र चुनौती
केन्द्रमा कोषको कार्यालय छ भने ७७ वटा जिल्लामा सहजकर्ता छन् । आगामी एक वर्षमा सातवटै प्रदेश र दुई वर्षमा सबै जिल्लामा शाखा तथा ४ वर्षभित्र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कोषको सन्जाल (नेटवर्क) विस्तार गरी सेवा दिने कार्यक्रम छ । कोषले क्रमिक रूपमा चालु (पहिलो) वर्षमा १२ हजार, दोस्रो वर्षमा २० हजार, तेस्रो वर्षमा ३० हजार र चौथो वर्षमा ४० हजार गरी ४ वर्षमा करिब एक लाख मानिसलाई स्वरोजगार बनाउने रणनीति बनाएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्र र पर्याप्त पूर्वाधार नभएको र सञ्चार कठिनाइ भएका विकट ठाउँमा ऋण लिनेले पैसा कोषको खातामा जम्मा गरे पनि ‘कम्युनिकेसन’ को समस्याका कारण कोष जानकार नरहने स्थिति बन्छ । कोषको योजना कार्यान्वयनमा देखिएका यस्ता समस्या प्रदेशअनुसार फरक छ । जसले कुन प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा बढी प्राथमिकता दिने भन्ने छुट्याउन गाह्रो भइरहेको छ ।
युवा स्वरोजगार कोषले कसलाई बुझ्ने ?
युवा भन्नाले १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई मानिन्छ । तर, उद्यमशीलता ६० वर्षको व्यक्तिले पनि गर्न सक्ने भएकाले कोषले कार्यक्षमताका आधारमा ४० वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिको योजना पनि लिने गरेको छ । कोषको लगानीमा मुख्य आकर्षण हुनुुमा विनाधितो ऋण, ६० प्रतिशतसम्म ब्याज छुट र बिमाको लागत पनि सबै कोषले बहन गर्ने व्यवस्था छ ।
बेरोजगार मानिसले केही काम गर्न चाहे, उद्यमशीलताको योजना भएर पनि लगानी गर्ने क्षमता नभएका व्यक्तिलाई स्वरोजगार योजनामा सहभागी गराइन्छ । सामान्यतः कोषले निम्न वर्गको उद्यमीलाई सहयोग गर्छ । बैंकबाट ऋण लिन धितो छैन, ब्याज धेरै तिर्न सक्दैन र बिमाको लागत पनि तिर्न सक्दैन भने कोषले सहयोग गर्छ । स–सानो व्यवसायमार्फत स्वरोजगार हुन सक्ने स्थितिमा विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने कोषको योजना हो । यस्तो युवा, जोसँग काम गर्ने क्षमता छ, उद्यमशीलता गर्न चाहन्छ तर पैसा छैन भने उनीरुलाई कोषले सम्बोधन गर्छ । तर, कोषले लगानी गर्ने माध्यम भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी हो ।
कुनै पनि सहकारी संस्था र वित्तीय संस्थाले कोषबाट गएको पैसामा ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था छ भने राम्रोसँग व्यवसाय सञ्चालन गरेर कर्जा तिरिसकेपछि ६० प्रतिशत ब्याज छुट पाउँछ । व्यावसायिक उत्थानलाई हेरेर फेरि उसले दोस्रोपटक पनि कर्जा लिन पाउँछ । कारोबारलाई नियमित बनाउन अन्तिममा मात्रै ब्याज फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यो कार्यक्रम मनाङ र मुस्ताङबाहेक ७५ जिल्लामा सञ्चालित छ ।
विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरू अर्धदक्ष (सेमी स्किल्ड) हुने भएकाले उनीहरूमा लगानी गर्नु उचित मानिन्छ । विदेशबाट फर्किएका अर्धदक्ष व्यक्तिहरू कोषले लगानी गर्ने आधारभूत व्यक्ति हुन सक्छन् । कोषको पहिलो प्राथमिकतामा सेमी स्किल्ड व्यक्तिहरू पर्छन्, चाहे ती जोसुकै हुन् । नेपालमै काम गरेका व्यक्तिहरू पनि सेमी स्किल्ड छन् भने कोषमा योजनामा समेटिन्छन् ।
कोभिड पीडामा कोषको भूमिका
कोभिड–१९ का कारण रोजगारी र व्यवसाय गुमाएकालाई पनि कोषले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । जसले गर्दा अहिले कोषमा फाइलको चाङ छ । कोभिड अघिभन्दा कोभिड पछि स्वरोजगार हुन चाहने र केही गर्नुपर्छ भन्नेको चाप बढी छ । नेपालकै एक अध्ययनले कोभिडपछि करिब २५ लाख बेरोजगार भएको देखाएको छ । तीमध्ये केहीलाई कोषले सम्बोधन गर्ने अवसर मिलेको छ । २०७८ असारसम्म कोषमार्फत स्वरोजगार बनेका ७९ हजारमध्ये नौ हजार कोभिडपछि स्वरोजगार बनेका हुन् ।
कोभिडपछिको अवस्था हेर्दा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाले गाउँमै गएर कृषिमा आधारित परियोजनाका लागि कर्जा माग गरेको देखिन्छ । ठूलो लगानी आवश्यक व्यवसायलाई कोषको कर्जाले सहयोग गर्न नसक्ने भएकाले साना कफी, चिया पसलजस्ता व्यवसायमा पनि कर्जा माग भएको छ ।
कोषमार्फत कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा व्यवसायीले सम्भावित उतारचढावको योजना बनाउने गरेका छैनन् । व्यवसाय विस्तार गर्दै गर्दा जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको देखिन्छ । साना व्यवसायीले मौज्दात घटाउने, कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने जस्ता समस्याले व्यवसायको आकार नै घटाएका छन् । उत्पादन घटेपछि भुक्तानीको समस्या हुनु स्वभाविक हो ।
कोभिडपछि यस्तो समस्या भएका व्यवसायलाई कर्जा अवधि दुई वर्षबाट बढाएर तीन वर्ष बनाइएको छ । तिर्ने किस्ता सानो भए पनि गरिरहेको पेसा÷व्यवसाय छाडेर हिँड्ने अवस्था नआओस् भनेर यसो गरिएको छ । बैंकिङ भाषामा यसलाई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण भनिन्छ । साथै प्रस्तावित परियोजनाको संख्या बढी हुँदा राम्रा परियोजना छान्न सम्भव भइरहेको छैन भने बजेट कटौतीका कारण पर्याप्त तालिम पनि दिन समस्या भइरहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कोषको भूमिका
बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफामूलक संस्था हुन् । तर, कोष गैरनाफामूलक संस्था हो र यसले सेवा मात्रै प्रवाह गर्छ । कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत अप्रत्यक्ष लगानी गर्छ । त्यसैले उनीहरूसँग समन्वय आवश्यक छ । कोषले कुन संस्थामार्फत लगानी गर्नेभन्दा पनि कुन व्यक्तिले लाभ लिँदै छ भन्ने कुरा हेर्छ । कोषले वित्तीय संस्था तथा सहकारीले गरेको लगानीमा अनुगमन गर्छ । यसो गर्दाको लागत सरकारले बहन गर्छ । कसले वित्तीय मध्यस्तकर्ताको सहयोगमा कर्जा लिँदै छ भन्ने अध्ययन गरेर मात्रै कोषले लगानी गर्छ । कोषबाट लिएको स्रोतबाट सहकारी संस्था नाफामुखी भए भने कोषले अनुगमन गर्छ । उनीहरूलाई ‘प्रोफिट मार्जिन’ राखेर मात्रै कोषले स्रोत उपयोग गर्न दिने भएकाले तोकिएभन्दा बढी मार्जिन राखेको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ ।
धितोबिनाको कर्जा तिर्न आनाकानी गरे के हुन्छ ?
कोभिडका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै कोषमा पनि कैफियत देखिएको छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न असुलीका लागि विभिन्न प्रक्रियामा जाने, कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण वा कर्जा असुलीको हरसम्भव उपायको खोजीमा कोष लागेको छ ।
प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले कर्जा असुलीका लागि भूमिका निर्वाह गर्छन् । सीडीओसँगै प्रत्येक जिल्लामा कोषको कर्जा असुली सहजकर्ता हुन्छन् । सहजकर्ताले सीडीओ र कोषको संयन्त्र प्रयोग गरेर कर्जा असुली गर्न सक्छन् । धितो नभए पनि कर्जाको बिमा हुने भएकाले असुलीमा त्यहाँबाट सहयोग हुन्छ । त्यस्तै धितो नलिए पनि ऋणीको कागजात अथवा पुर्जाको फोटोकपी कोषसँग हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्धन्यायिक निकाय भएकाले असुली गर्न सजिलो पनि छ ।
छोटोछोटो समयमा हुने सरकार परिवर्तनले कोषलाई अस्थिर बनाइरहेको छ । नेतृत्वले आफू आबद्ध सहकारीमा लगानी गर्न खोज्ने, आफ्नो जिल्लामा लगानी गर भन्ने जस्ता कामले कोषको लगानी प्रभावित हुने गरेको छ । जिल्ला अथवा प्रदेशस्तरका नेताले पनि कोषको कर्जा लिएको देखिन्छ । तर, निर्वाचनअघि उनीहरूले कर्जा चुक्ता नगरे वा नियमित कर्जा भुक्तान नगरेको पाइएमा निर्वाचनमा उठ्न नपाउने स्थितिले स्वनियमन पनि भइरहेकै छ ।
कोषको लगानी र स्रोत व्यवस्थापन
कोषले अहिलेसम्म कृषि, व्यापार, साना तथा घरेलु उद्योगको क्षेत्रमा करिब नौ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । सरकारले कार्यालय व्यवस्थापनको खर्च मात्र दिँदै आएको छ । हालसम्म ४० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्रोत उपलब्ध गराएका छन्, जसको ब्याज त्रैमासिक रूपमा भुक्तानी भइरहेको छ ।
कुल लगानीको करिब १० प्रतिशत अर्थात् ९० करोड रुपैयाँ हाराहारी लगानीमा कैफियत देखिए पनि ५ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड रुपैयाँ असुली हुने क्रममा छ अर्थात असुली हुुने पक्का भएको छ । कैफियतपूर्ण कर्जामध्ये करिब २२ करोड रुपैयाँमा समस्या आउने देखिएको छ ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजकार कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीको लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक जर्नल ‘अर्थचित्र’बाट साभार गरिएको हो ।
६ महिनामा नबिलको नाफा २ अर्ब १८ करोड, यस्ता छन् अरू सूचक
एनआईसी एशियाले ६ महिनामा गर्‍यो २ अर्ब ४० करोड खुद नाफा, ‘अधिकांश वित्तीय सूचकांकमा नम्बर वान !’
राष्ट्र बैंकले खोलिदियो बैंकर्स अस्पताल बनाउने बाटो, बैंकरको समाजसेवी सपना साकार होला ?
आईपीओको खडेरी तोडियोः एकै पटक पाँच कम्पनीलाई सवा अर्बको निष्काशन अनुमति
साढे चार अर्बको मौलाकाली केबुलकार निर्माण सुरु, स्थानीयलाई ४९ प्रतिशत सेयर
भारतलाई तिर्ने पैसा पनि नभएपछि इन्धनको भाउ बढाइयो, १५ दिनमा अझै करिब २ अर्ब घाटा कसरी सहला ?
अब भिजिट भिसामा खाडी राष्ट्र र मलेसिया जान नपाइने, नेपाल सरकारले लगायो रोक
महालक्ष्मी विकास बैंकले विपतमा पनि बढायो नाफा, खुद सञ्चालन मुनाफामा उत्साहजनक सुधार
लिटमस केबलको ‘पावर पार्टनर्स मिट–२०७८’ सम्पन्न
भारतलाई तिर्ने पैसा नभएपछि निगमलाई सरकारले जुटाइदियो १ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ !
कृषि विकास बैंकले यत्तिमै चित्त बुझाउनु हुन्न, एग्रेशिभ मुभ लिनुसः गभर्नर अधिकारी
महिला उद्यमशीलता विकासमा नबिल बैंकले सघाउने, दिगो बैंकिङका प्रयास लक्षित वर्गमा पुग्ने विश्वास
तारा एयरले इलामको सुकिलुम्बा विमानस्थलमा उडान शुरु गर्ने, काठमाडौंदेखिको भाडा ८७ सय
पैसा नभएको चेक दिने रिजाललाई १२ लाख जरिवाना, २ दिन बस्नेगरी आजै जेल हालियो